Isimanga: Lona umthelela omkhulu ezinqumweni zamakhasimende zokuthenga |I-Camei Ele&Stationery
Isimanga: Lona umthelela omkhulu ezinqumweni zamakhasimende zokuthenga
Wake wa-oda isemishi ngoba umngane wakho noma oshade naye wenze, futhi kuvele kuzwakale kukuhle?Leso senzo esilula singaba isifundo esihle kakhulu owake waba naso sokuthi kungani amakhasimende ethenga - nokuthi ungabenza kanjani ukuthi bathenge okwengeziwe.
Izinkampani zicwilisa amadola nezinsiza kunhlolovo, ziqoqa imininingwane futhi ziyihlaziye yonke.Bakala yonke indawo yokuthinta futhi babuze amakhasimende ukuthi bacabangani ngemva cishe kwakho konke okwenziwayo.
Nokho, izinkampani eziningi azinaki ithonya elibaluleke kakhulu esinqumweni sokuthenga sanoma yiliphi ikhasimende: ukuqaphela lokho amanye amakhasimende akwenzayo ngempela.
Sekuyisikhathi eside sikhuluma ngomthelela womlomo, ukubuyekezwa kanye nezinkundla zokuxhumana ezinawo kumakhasimende nasezinqumweni zawo.Kodwa ukubona abanye abantu - abantu ongabazi nabangane ngokufanayo - ukusebenzisa futhi njengomkhiqizo kunomthelela omkhulu ekuthengeni izinqumo.
Buka, bese uthenge
Abacwaningi be-Harvard Business Review bahlangabezane nalokhu kuqaphela: Amakhasimende ngokuvamile abheka amanye amakhasimende ngaphambi kokuba enze izinqumo zokuthenga.Abakubonayo kubaluleke kakhulu ekulolongeni imibono yabo ngomkhiqizo, isevisi noma inkampani.Eqinisweni, "ukubuka kontanga" kunomthelela omkhulu ezinqumweni zamakhasimende njengokukhangisa kwezinkampani - okuyinto, vele, ebiza kakhulu.
Kungani amakhasimende ethanda ukuthonywa ontanga?Abanye abacwaningi bathi kungenxa yokuthi siyavilapha.Njengoba kunezinqumo eziningi kangaka okufanele zenziwe nsuku zonke, kulula ukucabanga ukuthi uma abanye abantu besebenzisa umkhiqizo muhle ngokwanele.Bangase bacabange, “Kungani ngizama ukuzitholela lokhu ngokucwaninga noma ngokuthenga engizozisola ngakho.”
4 amasu ngawe
Izinkampani zingasebenzisa lo mqondo wobuvila.Nazi izindlela ezine zokuthonya amakhasimende ukuthi athenge ngokusekelwe ekubonweni kontanga:
Cabanga ngeqembu, hhayi nje umuntu.Ungagxili nje ekuthengiseni umkhiqizo owodwa kumuntu oyedwa.Ezinhlelweni zakho zokumaketha, ukuthengisa kanye nesevisi yamakhasimende, nikeza amakhasimende imibono yokuthi angabelana kanjani ngomkhiqizo wakho.Nikeza izaphulelo zeqembu noma unikeze amakhasimende amasampula azowadlulisela kwabanye.Isibonelo: Amathini e-Coca-Cola enziwe ngendlela oyifisayo eminyakeni embalwa edlule ukuze akhuthaze ukuwadlulisela “kumngane,” “inkakha,” “umama” kanye nenqwaba yamagama angempela.
Yenza umkhiqizo ugqame.Abaklami bomkhiqizo wakho bangenza okuthile kulokhu.Cabanga ngendlela umkhiqizo obukeka ngayo uma usetshenziswa, hhayi nje uma uthengwa.Isibonelo, i-iPod ye-Apple yayinama-earphone amhlophe - abonakalayo futhi ahlukile ngisho nalapho i-iPod yayingasekho.
Vumela amakhasimende abone okungabonakali kangako.Ukwengeza nje inombolo yabathengi bomkhiqizo kuwebhusayithi kukhulisa ukuthengiswa kanye nenani elizokhokhwa amakhasimende, abacwaningi bathole.Ngokungangabazeki, izivakashi zamahhotela maningi amathuba okuthi ziphinde zisebenzise amathawula azo uma zinikezwa izibalo zokuthi bangaki abanye abaphinda basebenzise ehhotela.
Ibeke lapho.Qhubeka utshale abantu usebenzisa imikhiqizo yakho.Iyasebenza: Lapho u-Hutchison, inkampani yezobuchwepheshe ezinze e-Hong Kong, yethula umkhiqizo weselula, yathumela abantu abasha eziteshini zesitimela phakathi nohambo lwakusihlwa idonsa i-handset yayo ukuze ibambe amehlo.Kwasiza ukuphakamisa ukuthengisa kokuqala.
Insiza: Ithathwe ku-inthanethi
Isikhathi sokuthumela: May-23-2022